विश्वकाे जनसंख्या सन्तुलन गुमाउदैः अहिले 'नातिनातिनीभन्दा बाजेबजै धेरै'
विश्वकाे जनसंख्या सन्तुलन गुमाउदैः अहिले ‘नातिनातिनीभन्दा बाजेबजै धेरै’
इतिहासमा पहिलो पटक विश्वमा बच्चाहरूको भन्दा वृद्धहरूको जनसङ्ख्या धेरै हुन पुगेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ।
बढ्दो अन्तर :
यही प्रवृत्ति कायम रहने हो भने सन् २०५० सम्ममा यो अन्तर झन् बढ्दै जानेछ। त्यतिबेला भरखर जन्मेदेखि चार वर्ष उमेर समूहको एक व्यक्तिबराबार दुई जनाभन्दा बढी ६५ वर्ष माथिका व्यक्तिहरू हुनेछन्।
जनसङ्ख्याविद्‌हरूले दशकौँ देखि राख्दै आएको अभिलेखले एउटा प्रवृत्ति देखाउँछ – सबैजसो मुलुकमा हाम्रो बाँच्ने उमेर लम्बिँदै गएको छ र आवश्यक सङ्ख्यामा बच्चा जन्माउन छोडेका छौँ।
विश्वव्यापी प्रजनन दर सन् १९६० मा प्रतिमहिला पाँच जनाबाट घटेर २.४ पुगेको छ । यसले तपाईँलाई कसरी प्रभावित बनाउँछ वा प्रभावित बनाइसकेको छ?
हजुरआमा/हजुरबा र नातिनातिना :
उनी भन्छन्, “नातिनातिनीभन्दा बाजेबजै धेरै भएको समाजको सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे एकपटक विचार गरौँ न।”
विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् १९६० मा एक महिलाले सरदर पाँच बच्चा जन्माउँथिन्। झन्डै ६० वर्षपछि अहिले त्यो आधामा पुगेको छ- अहिले एक महिलाको भागमा सरदर २.४ बच्चा पर्छन्।
पाका मानिसहरूको सङ्ख्याः
विकसित मुलुकमा वृद्धवृद्धाहरूको सङ्ख्याको समस्या अझ टड्कारो देखिएको छ।
त्यहाँ जन्मदर अझ कम छ र त्यो आर्थिक सम्पन्नतासँग जोडिएको छ। बालमृत्युदर कम छ र जन्म नियन्त्रण गर्ने उपायमाथि सजिलो पहुँच छ। बच्चा हुर्काउने काम तुलनात्मक रूपमा महँगो हुन सक्छ।
त्यस्ता मुलुकहरूमा महिलाहरू अलि परिपक्व उमेर भएपछि बच्चा जन्माउँछन् त्यसैले बच्चा पनि थोरै मात्र जन्माउँछन्।
जापानमा जन्मदर घटेको छ तर ६५ वर्ष माथिका मानिसहरूको सङ्ख्या एकतिहाइ पुगिसकेको छ ।
जीवनको गुणस्तर राम्रो हुनुको अर्थ यी देशहरूमा मानिसहरू “लामो उमेर” सम्म बाँच्छन्। एउटा प्रमुख उदाहरण जापान हो जहाँ औसत उमेर ८४ छ।
यो संसारको सबभन्दा ठूलो (राष्ट्रिय औसत) सङ्ख्या हो। सन् २०१८ मा ६५ वर्ष माथिका मानिसहरूको सङ्ख्या जापानमा २७ प्रतिशत थियो जुन विश्वकै सबभन्दा ठूलो सङ्ख्या हो।
जापनमा पाँच वर्ष मुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात कस्तो छ त? संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको जम्मा ३.८५ प्रतिशत मात्रै।
यो दोहोरो चुनौतीले जापानी अधिकारीहरू दशकौँदेखि पिरोलिएका छन्। गत वर्ष सरकारले अवकाश लिने उमेर ६५ बाट बढाएर ७० वर्ष घोषणा गरेको छ।
यो यदि कार्यान्वयनमा आयो भने जापानमा कामदारहरू संसारभरिमै सबभन्दा उच्च उमेरमा अवकाश लिनेमा पर्नेछन्। तर असन्तुलित जनसङ्ख्याले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई पनि खतरामा पार्दैछ।
चीनमा ६५ वर्ष माथिका मानिसको जनसङ्ख्या जापानको तुलनामा कम छ – अर्थात् जम्मा १०.६ प्रतिशत। सन् १९७० मा कार्यान्वयनमा ल्याइएको बच्चाको जन्मनियन्त्रण कार्यक्रमका कारण त्यहाँका महिलाहरूको प्रजनन दर पनि कम नै छ – अर्थात् १.६ बच्चा प्रति महिला।
पाँच वर्षमुनिका बच्चाको सङ्ख्या कुल जनसङख्याको छ प्रतिशत मात्र छ।
अफ्रिकी मुलुकहरूमा संसारमै उच्च जन्मदर छ तर बालमृत्युदर पनि उच्च नै छ
बच्चाहरूको सङ्ख्या र जीवनको गुणस्तर :
अफ्रिकी मुलुकहरू जन्मदरको सन्दर्भमा गुणस्तर र सङ्ख्याबीच रहेको अन्योलका राम्रा उदाहरण हुन्। त्यहाँ उच्च जन्मदर छ।
उदाहरणका लागि नीजेरमा सन् २०१७ मा प्रतिमहिला बालजन्मदर ७.२ छ। तसर्थ यसलाई विश्वको “सबैभन्दा उर्वर मुलुक” मान्न सकिन्छ।
तर यही मुलुकमा सबैभन्दा उच्च बालमृत्युदर पनि छ- नीजेरमा जन्मिएका १००० बच्चामध्ये ८५ को मृत्यु हुने गरेको छ। थुप्रै मुलुकहरूमा जनसङ्ख्या स्थिर राख्न आवश्यक सङ्ख्या २.१ भन्दा कम जन्मदर रहेको छ ।
रुसमा जन्मदर घट्दै गएको छ
आर्थिक असर :
यूरोपियन युनियन १९.७
ल्याटिन अमेरिका/क्यारिबियन ८
मध्य पूर्व/उत्तर अफ्रिका ४.९
सब सहारा अफ्रिका ३
श्रोत: UN Population Division/World Bank
“जनसङ्ख्याले हाम्रो जीवनको हरेक पक्षलाई असर गर्नेछ। आफ्नो घरको झ्यालबाट सडकमा हिँडिरहेका मानिसहरू, घर, ट्राफिक, उपभोग हेर्दा सबै नै जनसङ्ख्याबाटै परिचालित देखिन्छन्,” अक्सफोर्ड इन्स्टिट्युट अफ पपुलेशन एजिङका जर्ज लिसनले बीबीसीलाई बताए।
एउटा कुरामा भने सर्वसम्मति छ – वृद्ध जनसङ्ख्याको ‘टाइम बम’लाई सरकारहरूले निष्क्रिया पार्नुपर्नेछ र उनीहरूले त्यो प्रयत्न गरिरहेका पनि छन्।
चीनले उसको “एक बच्चा नीति” सन् २०१५ मा समीक्षा गरेर परिवर्तन गर्‍यो र सन् २०१८ मा अर्को वर्ष सम्ममा जन्मदरमा लगाइएको प्रतिबन्ध नै अन्त्य गर्ने सङ्केत गरेको छ।
राज्यद्वारा सञ्चालित पत्रिका द पीपल्ज डेलीमा प्रकाशित एउटा लेखमा बच्चा जन्माउनु परिवार र राष्ट्र दुवैको चासोको विषय भएको उल्लेख छ।
श्रम बजारमा वृद्धहरूबाट फाइदा हुन सक्ने क्षेत्र पनि छन् ।
यसको मुख्य तर्क हो – मानिसहरू स्वस्थ्य रहे भने उनीहरू लामो समयसम्म र सशक्त भएर काम गर्न सक्छन् जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवाको मूल्य कम हुन सक्छ।
“महिलाहरूको कार्यक्षेत्रमा सङ्ख्या धेरै भएको अर्थतन्त्रमा वृद्धिदर खस्कने कम देखिएको छ। महिला कामदारहरू धेरै भएका ठाउँमा आर्थिक सङ्कट परेका बेला पनि अर्थतन्त्र धरमराउँदैन। धेरै महिलाहरू काममा भएका ठाउँमा उनीहरू गरिबी कम गर्ने सशक्त माध्यम पनि हुन पुग्छन्,” आईएलओका अर्थशास्त्री एकहर्ड अर्न्स्टको भनाइ छ।
फर्नान्डो ड्वार्टे (बीबीसी विश्व सेवाबाट साभार)
← नेपाल एग्रो लघुबित्तको आईपिओ नतिजा हेर्नुहोस्।
आर्मीलाई सोझो सेटमा हराउँदै एपिएफ बन्याे राष्ट्रिय महिला भलिबलको च्याम्पियन →